ငွေကြေးအတွဲသစ်သုံးမျိုးကို ရောင်းဝယ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း သတင်းပေးရတဲ့အတွက် ပျော်ရွှင်မိပါတယ် - တူရကီငွေကြေး လီယာ(USDTRY), မက်ဆီကန်ငွေကြေး ပီဆို (USDMXN) နှင့် ဘစ်ကွိုင် (BTCUSD) တို့ကိုပါ ရောင်းဝယ်နိုင်ပါပြီ.
သိပ်မကြာသေးခင်ကာလက ဖောက်သည်တော်တော်အချို့အနေနဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်မယ့် ငွေကြေးအတွဲသစ် သုံးမျိုးကို ထပ်ထည့်ပေးနိင်မလားဆိုပြီး မေးမြန်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်. အခုတော့ လက်တွေ့ပဲ မြန်မြန် အဖြေပေးလိုက်ပါပြီ. အခုဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့အမြတ်ငွေရရှိစေမယ့် အရောင်းအ၀ယ်နည်းဗျူဟာတွေကို စမ်းသပ်ချဲ့ထွင်နိုင်ဖို့အတွက် ရောင်းဝယ်စရာငွေကြေးအတွဲတွေ ပိုပိုပြီးများလာပါပြီ. ပိုပြီးအောင်မြင်တဲ့ အရောင်းအ၀ယ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာအောင် အခုပဲ ငွေကြေးအတွဲသစ်တွေကို စမ်းသပ်ရောင်းဝယ်ကြည့်လိုက်ပါ!